Ngaba i-intanethi iya kugcina isikhundla sayo kwiminyaka eyi-15? Yintoni eya kuba yimisebenzi yayo? Ungatshintsha njani iiwebhusayithi? Makhe uphendule lo mbuzo ngokujonga kwixesha elidlulileyo-eli-12 edlulileyo ...
IWebhsayithi yeWebhu yehlabathi inabantu abangama-250 yezigidi zabantu. Amaziko awazange amele iqoqo elinebalabala yeetekisi. Ubunzima bomda wesitya kunye nesantya sezothutho sinciphisa inani lemifanekiso. Ukuqhutyelwa kolwazi kwenzelwa ngokwemiqathango ekhoyo kwiinkqubo ezinamandla eziphantsi, kunye nenani elincinci lokukhumbula kunye nokusebenza kwememori. Iiseva zenza ukuba ufuna ngcono ...
Izithintelo zobuGcisa, ngokuqinisekileyo, zithintele ukudalulwa ngokugcwele kobuchule bezophuhliso zewebhu. Bahlala befuna ukuthulula isiqwenga se pozaboristey kunye ne-pozalvahche ukuze bazalise ngokupheleleyo izicwangciso zabo eziqhubekayo zokuphumeza umboniso wabo wokuphuhliswa kwesiza ... Kodwa isixa asizange sifane ukuze siqalise ezo projekthi. Ixesha lidlulileyo, inani labantu abaxhunyiwe landa ngokukhawuleza ngamawaka angama-1000 kunani lomhlaba wethu othandekayo.
Ubume beNethiwekhi buye butshintsha: ukongeza kwinto yokuba i-Intanethi ngumboneleli obalulekileyo wemidiya yamatyala, kwindlela yokunxibelelana kwanamhlanje, ukuzonwabisa ngokuzonwabisa, inzuzo kunye nokuzibonakalisa!
Kodwa oku akunjalo umda! Ukuphuhliswa kwezenzululwazi kunye nezobuchwepheshe kugaleleke kulo mbuso, okwenza i-intanethi ifikeleleke: kwii-desktop zePC ukuya kumajelo anamhlanje (iGalaxyTAB, i-iPAD, njl.), Ukuphuhliswa kwayo, ngokubanzi, ngekamva. Amaprojekti anamandla akwi-graphics manje avumela ukuba ulungelelanise ukubala, oku kunceda ukuxazulula iingxaki zobunzima obuyinkimbinkimbi enkulu kwi-Internet.
Ubuchwephesha bezithuthi ezitsha ngokupheleleyo zeendawo ezibonakalayo ngoku ziqwalaselwa ngamaofisi anqwenela ukuwakhulula! Ngokuqinisekileyo yonke into ikhula ngokukhawuleza! Yintoni eya kwenzeka kwikamva? Masenze isibikezelo esincinci malunga nokubonakala kwesayithi esilula kunye nendima yeNethiwekhi ezintlanu, iminyaka elishumi elinesihlanu.
Le yithuba lesiguqu apho ubuchwepheshe be-flash buza kuphelisa ixesha lawo. Ngaphandle kwelokuba banzima kakhulu, abahlali bekulungele ukusetyenziswa, abayinto ebaluleke kakhulu kwaye iyinkimbinkimbi. Kwiwebhsayithi, inani leetekisi ezingadingekile liyancipha, uninzi lwengqalelo luhlawulwa kwiinkcazo ezibonakalayo, iintloko ezibonakalayo, ngenxa yokudibanisa ngokucacileyo kwemibala engazange ithandwe ngaphambili. Isigxina ekwakheni isayithi yinto edlulileyo.
Makhe siqwalasele umzekelo: siceba ukudala isayithi elinjalo, umbala wombala oya kuhambelana nokukhanyisa ngaphandle kwefestile kwaye kufuneka uvelele. Kule nto sifuna ukuba ulungelelaniso lomsebenzisi, kuba kuyimfuneko ukulungelelanisa kwiimeko (nangona ukuba i-predict coincided). Kodwa zonke ezi ziintyatyambo, kodwa i-berry yinto yokuphunyezwa kwisithuba-fowuni senani elidibeneyo (imibala eyahlukileyo, ukwakhiwa kwezilungiso eziyinkimbinkimbi, ).
Indlela yokujongana nale nto? Umsebenzi onjalo unokwenziwa yikhompyutha yomsebenzisi ngokusebenzisa isicelo se-3d kunye nesethi yemiyalelo eqhelekileyo. Amakhadi eemifanekiso ngexesha lethu avumela kakhulu! Ngokutsho kwedatha yakutshanje, okwangoku kukho ukuphuhliswa kwezicelo ezinjengeWebGl, ezokusikhokelela ekubonakaleni kwe-Intanethi.
Ii-3d-sites ziya kuba yinto evamile, iifom zangaphambili ziya kuhlaziywa kwizinto ezintsha, eziza kuba yimali yokufumana i-intanethi yoluntu, apho abaphuhlisi beenkqubo ze-3D baya kudibanisa ngokuqinisekileyo. Itheknoloji yamadivayisi eselula ayiyi kuguquka emva kokuphuhliswa. Ngokungafani neekliniki ezikhoyo ezikhoyo, ziya kusebenzelana ngokulula kunye neeseti zeenkcukacha ezinkulu, kunye nokwenza amaziko oonophelo osebenzayo apheleleyo kunye nama-metacommunication. Kwiidolophu ezinkulu, ubomi obungenakho iikhompyutheni akusayi kuphinda kwenzeke! Nokuba ukulayishwa kwe-assortment kwiivenkile kuya kwenziwa kwi-metacommunicator. Ukufumaneka kweempahla eziyimfuneko kuza kuboniswa ngumyalezo. Umsebenzi weziza uya kuhluke ngokupheleleyo. Baya kusebenza njengethuluzi lokukhetha izinto kunye neenkonzo kunoma yimuphi ummandla wokunika iNethiwekhi. Ukupapashwa kuya kuphuhliswa ngokukhawuleza kwinqanaba elitsha kwaye lingalindelekanga kwaye likhangele iindlela ezingcono.
Ubuchwepheshe bekhompyutheni bukhulile kangangokuba ngokukhawuleza siya kusuka ekulawuleni okuqhelekileyo koomatshini. Inkqubo yomsebenzi iya kulawulwa ngezandla (kunye nemilenze, iindlebe, iindonga kunye neentloko), eziza kubangela umsebenzi we-Intanethi kwimifanekiso emihle ngokwenene. Umsebenzisi uya kuba kwindawo eqhelekileyo, ukulawula izandla zakhe, kwaye angayibukeli inkqubo ukusuka kwicala. Ukuba ngumhlanganyeli ngokupheleleyo kulo msebenzi yizigidi zentshukumo ezintsha. IiSayithi ziza kuba njenge-estate, ziza kuba zibiza kakhulu kwaye zibe yoshishino ngokwabo. Imininzi emininzi yekhulu lama-20 iphupha ngelo lizwe elitsha elithe tye, kwaye liphela kwikona ...
Iqela lequmrhu: indlela yokuziphatha ngayo?
Indlela yokufezekisa impumelelo ebomini
Kuthekani ukuba umntwana unqabana aze ambethe?
Iimpawu zengqondo zabaselula
Isaladi kunye neinaninate enamathanga
Ukunyuka kwebusika: impilo enhle okanye eyingozi?
UPavel Sheremet wabulawa phakathi kweKiev: yintoni ekhoyo emva kokufa komlobi?
Imithetho ebalulekileyo yokunyamekela imilenze yabasetyhini